Oreo ब्रान्डबाट घण्टा सम्म सबै 'आश्चर्य' गायब हुन्छन् क्रिएटिव अनलाइन
'O' Oreo ब्रान्डिंगबाट सबैको आश्चर्यमा हराउँदछ
La बिस्कुट ब्रान्डले विश्वभर चकलेटको लागि मान्यता प्राप्त गर्‍यो र त्यो पाम तेल, तपाईंले तपाईंको लोगो डिजाइनबाट अक्षर 'O' हटाउनुभएको छ। अर्को शब्दहरु मा, यो यो एक नकारात्मक अन्तरिक्ष मा बदलिएको छ जहाँ हाम्रो दिमाग 'O' को आकर्षित गर्न को लागी सक्षम छ त्यहाँ छ भने जस्तै।
यो Oreo कि थियो फेसबुक मा आफ्नो लोगो छवि पोस्ट, तर सबैको आश्चर्यकालागि 'O' अक्षरको अभावमा। यसको कारण? किनकी सबै चीजको आशय हुन्छ र रेड क्रससँग सम्बन्धित छ र जागरूकता बढाउने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भन्दा बढि।
Oreo ब्रान्डबाट 'O' अक्षरको गायब हुनु एक पहलको कारण हो जसमा रेड क्रसले भाग लिएको छ विश्व रक्तदाता दिवसमा भाग लिन कसैलाई पनि प्रोत्साहित गर्न।
हाम्रो हे हराइरहेका छन्! हामीलाई ती लागि भर्नुहोस् #विश्व रक्तदाता दिवस लिंकमा क्लिक गरेर र अमेरिकन रेड क्रसको साथ हस्ताक्षर गरेर तपाईंको O, A's, र B लाई दान गर्न। # मिसिंगटाइप्सहरू https://t.co/56DRujTVxf pic.twitter.com/s9LT3kZmzI
- OREO कुकी (@ Oreo) जुन 14, 2019
जसै दिन गयो, Oreo कुकीले त्यो क्रीम भर्दै थियो त्यो ब्रान्ड यति लोकप्रिय बनाएको छ। अन्त्यमा दुई 'ओ' आफ्नो साइटमा फर्किए र यो ब्रान्डसँग सधैं जहिले पनि जारी रहन्छ जुन ट्विटर र फेसबुक जस्ता अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैको ध्यान आकर्षण गर्न यसको लोगोमा आवश्यक प्रभाव खोजेको छ।
यो सबै रक्तदान गर्न को लागी गर्न को लागी केहि छ। यो यस्तो होइन कि यो 'ओ' हो, तर यो ० नकारात्मक वा ० सकारात्मक हुन सक्छ। र यो जहाँ Oreo यस तरिका मा खेलेको छ एक राम्रो मार्केटिंग बम्प दिनुहोस् र ती विशेष दिनको लागि रेड क्रस पत्रमा भाग लिन सक्ने सबैको ध्यान कल गर्नुहोस्।
यो हो एबीओ रक्त समूह प्रणाली, त्यसैले रेड क्रस सबै कम्पनीहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ कि ती विशेष दिनको लागि ती चिन्हहरू उनीहरूको लोगोबाट हटाउन सकिन्छ। हामी अमेजन, एडोब र अरू धेरैको बारेमा कुरा गर्छौं; खैर, चाँडै तपाईं हुनेछ एडोब फ्रेस्को ड्रइंग अनुप्रयोगको रूपमा तपाईंको मोबाइल उपकरणहरूको लागि नयाँ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » 'O' Oreo ब्रान्डिंगबाट सबैको आश्चर्यमा हराउँदछ
Wacom ले बांस इंक प्लस घोषणा गर्‍यो ताकि तपाईं ब्याट्रीहरू बिर्सनुहोस्
एलोन मस्क भन्छन् कि ट्विटरमा कलाकारहरूलाई क्रेडिट दिएमा माध्यम नष्ट हुन्छ